Urban InVEST: kugadzikana mumaguta akangwara | Linux Addicts
Parizvino, maguta ari kuitawo maguta akangwara kana maguta akangwara. Tekinoroji inowedzera kutsvaga kuvhara mamwe masekete uye kubatsira vanhu zvakanyanya sezvinobvira, kunyangwe dzimwe nguva ichishandiswa zvinopesana. Vhura sosi ine zvakawanda zvekutaura muchikamu ichi zvakare, sezvaunga ratidza chirongwa cheUrban InVEST.
Zvinonzi chikamu chikuru chevanhu pasi rose vanogara mumaguta makuru, mumaguta makuru, nepo 70% yevagari vachagara nzvimbo dzemumaguta panosvika 2050 maererano nedzimwe fungidziro. Naizvozvo, maguta acharamba achikura, uye zvirinani zvishandiso zvinodiwa kuvandudza kugara zvakanaka kwevose.
Urban InVEST isoftware nyowani ye yemahara uye yakavhurwa sosi iyo inoti inobatsira panyaya iyi. Chishandiso chevashandisi kuona kwavanogona kugadzira nzvimbo dzekutora kabhoni uye kukurudzira kushandiswa kweveruzhinji, pamwe nekuremekedza nzvimbo dzakachengetedzwa. Mune mamwe mazwi, harisi guta rakangwara chete, asiwo iguta rakagadzikana rinoenderana nezviri kutsvakwa nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Kudyara mari kuchawedzera kunetsa sezvo shanduko yemamiriro ekunze ichikanganisa pasi uye huwandu hukuru hwevanhu hunofanirwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, uye vese vanogara mukati. megacities munzvimbo dzakaoma. Urban InVEST inogona kushandiswa kufanotaura kuti imarii inogona kuchengetwa pazvivakwa kana dutu guru, kubvumira vashandisi kurodha yavo yega data seti, kana kushandisa data seti kubva kune yakavhurika masosi seNASA satellite. Uye zvakare, Urban InVEST chimwe chikamu cheInVEST suite, inova chirongwa chakakura uye chinobatsira nyanzvi kumepu nekutarisa zvisikwa.
Mamwe mashoko - Shanyira webhusaiti yeprojekiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Urban InVEST: kugadzikana mumaguta akangwara